व्यावसायिक कृषिको समसामयिक विवेचना «
कोभिड–१९ पछि नेपाल फर्कने र नेपालमा नै रहने युवालाई सीपमूलक तालिम र कृषिमा आकर्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्रको हो ।
प्रसिद्ध विकास अर्थशास्त्री अल्बर्ट हिर्सम्यानको भनाइअनुसार कृषि व्यवसायले सबै औद्योगिक वा निर्माण क्षेत्रको कमसेकम पछाडि र अग्रगामी कडी उत्पन्न गर्ने कार्य गर्छ । यद्यपि विकासोन्मुख देशहरूको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्दा यो देखिन्छ कि विकासोन्मुख देशहरूमा कृषि व्यवसायको क्षेत्रले ऊर्जा, सञ्चार वा यातायातजस्ता केही सार्वजनिक सेवा–सुविधाहरूबाहेक अरू कुनै क्षेत्रको तुलनामा बढी मानिसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको हुन्छ । हालै गरिएका मूल्यांकनले संकेत गर्छ कि यससँग आबद्ध कडीहरू छन्, त्यो ग्रामीण मजदुरसँग सबै सकारात्मक रूपमा राम्रो संगठित कृषि कार्यक्रमका साथ महत्वपूर्ण मात्रामा प्रभावित हुने गर्छन् ।
उद्योगलाई लामो समयदेखि विकासको इन्जिनका रूपमा लिइन्छ । यसको विपरीत कृषिलाई आर्थिक प्रोत्साहनप्रति अनुत्तरदायी मानिएको थियो र यसले प्राविधिक परिवर्तनमा खास भूमिका निर्वाह गर्दैन । यसैले विगतका नीति–निर्माताहरू विश्वास गर्थे कि कृषि खर्चमा उद्योग प्रवद्र्धनले उत्पादनमा थोरै बलिदान दिनेछ वा त्यस्तै सन् १९६० र १९७० को दशकमा परम्परागत वृद्धिको महŒव छ भने, यदि नेपालजस्तो देशले छिटो कृषि वृद्धि, द्रुत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न चाहन्छ भने र थोरै गरिब मानिस, यसले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिको विकासमा जोड दिनुपर्छ । यद्यपि यो दुर्भाग्यपूर्ण छ कि विभिन्न कालखण्डमा आर्थिक वर्षको बजेट भाषणले कृषिमा कर लगाएको देखिन्छ ।
नेपालको हालैको योजनामा कृषिलाई शीर्ष प्राथमिकता क्षेत्रको दर्जा दिइएको छ, तर यसको वृद्धिदर सुस्त नै छ । यसमा चार अवस्थाका प्रश्नहरूको जवाफ दिन यो मामिलाको अवस्था उत्पन्न हुन्छ । पहिलो, विकासोन्मुख र सबैभन्दा कमविकसित देशले कृषिमा किन लगानी गर्ने ? दोस्रो, ‘प्राधान्य क्षेत्र’ का रूपमा कृषिको अवस्थालाई वास्तवमा कुन हदसम्म सरकारले लगानी सर्तमा अनुवाद गरेको छ ? तेस्रो, कुन बाह्य संस्थागत अवरोधले कृषि विकासमा बाधा पु-याउँछ ? अन्त्यमा, के त्यहाँ कुनै सफलता कथाहरू छन् जुन कृषिमा निरन्तर लगानीको औचित्य साबित हुन्छ ? केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा २.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको अनुमान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि २.५९ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको ३.२३ प्रतिशत तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धि १.९९ प्रतिशत रहेकोे अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको अंश क्रमशः २७.६५ प्रतिशत, १४.२७ प्रतिशत र ५८.०८ प्रतिशत रहेको छ ।
नेपालमा कृषिमा लगानी गर्न धेरै शक्तिशाली सामाजिक र आर्थिक तर्कहरू छन् । गरिबी निवारणको पक्षमा, कृषि आय अन्य अर्थतन्त्रमा भन्दा कम छ, ताकि कृषि आयमा दिगो वृद्धि पैदा गर्न समाजको सबैभन्दा ठूलो र गरिब वर्गको मद्दत गर्छ । यसले ग्रामीण सहरी बासिन्दालाई सीमित गर्न मद्दत गर्छ र यसले सहरहरू र सहरहरूमा हुने सामाजिक समस्याहरूलाई रोक्न मद्दत गर्छ ।
आर्थिक पक्षमा कुनै पनि देशले पहिले कृषि क्षेत्रको विकास नगरी कहिल्यै दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्न सकेको छैन । आजको आर्थिक शक्तिहरू (संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र युरोपियन युनियनका देशहरू) सबैले औद्योगीकरणअघि कृषि विकास गरेका थिए ।
पहिलेको यूएसएसआरले पहिले औद्योगीकरण गर्ने प्रयास ग-यो र असफल भयो । निम्न केही वा सबै प्रदान गरेर कृषिले आर्थिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ : बढ्दो उत्पादन क्षेत्रका लागि कच्चा माल; द्रुत–बढ्दो गैरकृषि उत्पादनका लागि खाद्य; निर्यात आय आयातित पुँजीगत सामान, कच्चा माल, पूर्वाधार उपकरण र ऊर्जाका लागि भुक्तान गर्न; बचतका रूपमा एक अधिशेष जुन उत्पादन र सामाजिक–आर्थिक संरचनामा लगानी गर्न सकिन्छ; लघु घरेलु उत्पादन र सेवा क्षेत्रका लागी एक प्रमुख बजार हुन सक्छ ।
कृषि व्यवसायले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । २० लाखभन्दा बढी परिवार, हजारौं निजी उद्यमसहित व्यापारीहरू, मिलरहरू, एजेन्टहरू, प्रोसेसरहरू, किसान समूहहरू र सहकारीहरू र केही प्यारास्ट्याटल संगठनहरू यस्तो कारोबारमा संलग्न छन् । त्यस्तै, निजी क्षेत्रले कुल कृषि उत्पादन व्यापारमा एक प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रक्रिया जारी छ । नेपालको कृषि परिदृश्यमा हेराइले झल्काउँछ कि कृषि उत्पादन जीडीपीको २६ प्रतिशत थियो ।
साना किसानहरूलाई प्राप्त गर्दै
यस पृष्ठभूमिमा साना किसानहरूलाई बुझ्ने र साना किसानहरूको सम्बन्धमा कृषि–व्यवसाय र कृषि उद्योग हेर्ने तरिकाले साना किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन ल्याउनेछैन । हामीले साना किसानहरूप्रति परम्परागत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेछ र तदनुसार उनीहरूतर्फको विकास दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । नयाँ अवधारणा र दृष्टिकोणले साना किसानहरू र कृषि व्यवसाय र बजारको आर्थिक पुरस्कार निर्धारण माध्यममा आधारित कृषि उद्योगबीचको गतिशील सम्बन्धका लागि आह्वान गर्छ । कृषि व्यवसाय र कृषि उद्योगलाई ग्रामीण झुकावमा प्रतिविम्बित गर्नु कुनै पनि पार्टीका लागि केही फाइदा हुनेछैन । के आवश्यक छ मार्केट संयन्त्रमा र ‘ग्रामीण झुकाव’ बाहिर पारी तीनै साझेदारहरूको पुनः संगठित गर्नु आवश्यक छ । यस दिशामा ‘जोखिम’ तत्व अवस्थित छ र यस्तो जोखिम सबै पार्टीहरूको कुशल सञ्चालनका लागि अनुकूल सरकारका नीतिहरूले कम गर्न सक्छ । परम्परागत सरकारी हस्तक्षेप र यसको प्रत्यक्ष संलग्नतालाई हटाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, अन्यथा ती साना किसानहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न प्रस्ताव गरिएको नयाँ दिशालाई गलत दिशामा पु-याउने शत्रुतापूर्ण कार्य हुन सक्छन् । साना किसानहरूलाई बजारमुखी कृषि–व्यवसाय र कृषि–उद्योगको पहलमा सहज बनाउन र साना किसानहरूलाई उच्च मूल्य–कम–भोल्युम उत्पादनहरूको उत्पादनतिर आकर्षित गर्न सरकार र यसका एजेन्सीहरूको नयाँ दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ । यसले उनीहरूको परिवारका लागि पर्याप्त खाना किन्न पर्याप्त आम्दानी गर्न सक्छ । साना किसानहरूले उनीहरूको परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त स्रोत अनाज उत्पादन गर्न सक्दैनन् र सरकारले उनीहरूलाई त्यो हासिल गर्न पर्याप्त स्रोत प्रदान गर्न नसकेको कुरा यसै वर्ष मलको आपूर्तिले देखायो ।
नेपालमा फलफूल, तरकारी, दुग्ध उत्पादन, कुखुरा, चिया, माछा र नगदे बालीको उत्पादन वर्षौंदेखि बढ्दै गइरहेको छ, किनकि बढ्दो जनसंख्या र आय, सहरीकरण, पर्यटक र आगन्तुकहरूको बढ्दो संख्या, प्रसारणको निर्यात क्षमताका कारण उद्योगहरू, यी उत्पादनहरूका लागि बजारको विस्तार पनि महत्वपूर्ण वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, दुग्ध, कुखुरा, अन्न, तेलहन, दाल र चियाको मामलाबाहेक सबै व्यापार शृंखला प्रणाली राम्रो संगठित छैन, उखु, सुर्तीजन्य, जुट र चियाजस्ता औद्योगिक वस्तुहरूको व्यापार लगभग सेट भएको छ, जहाँ किसानहरूले आफ्नो वस्तुको बिक्रीबाट उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउँछन् र उद्योगहरूले आफ्नो व्यापारको बजारमा थप व्यापारका लागि प्रयोग गर्छन् । यीबाहेक किसानहरू आफ्ना उत्पादनहरूको कारोबारमा संलग्न भइरहेका छन् ।
थोक प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा भाग लिने, किसान समूह र सहकारीमार्फत खुद्रा विक्रेताहरूलाई बेच्ने तिनीहरूको उत्पादनहरू र मूल व्यापारीहरू, थोक विक्रेताहरू वा तिनीहरूका एजेन्टहरू, आफ्नै क्षेत्र वा ग्रामीण बजारमा वा सामूहिक रूपमा उनीहरूको उत्पादनहरू व्यापार केन्द्रहरूमा ल्याउने गर्छन् ।
किसान समूह र सहकारी संस्थामार्फत व्यक्तिगत रूपमा उपभोक्ताहरूलाई सिधै बिक्री गरेर खुद्रा प्रणालीमा भाग लिने प्रचलन पनि हाल आएर अनुकरणीय भएको छ ।
केही कृषि उत्पादनहरू, विशेष गरी फलहरू, तरकारीहरू, अदुवा र कुखुराजस्ता नाश गर्नेहरू जम्मा हुने मार्केटिङ प्रणाली बारम्बार बजारका रूपमा देखिन्छन्, जुन निश्चित क्षेत्रहरूमा मूल्य क्र्यास र संकटको बेलामा बिक्री हुन्छ र अर्कातर्फ लगातार अभाव र उत्पादनहरूको अनुपलब्धता, अन्य क्षेत्रमा समेत थोरै थोक तथा खुद्रा बजारहरू, विभिन्न आकार र प्रकृतिका केही सहरी केन्द्रहरूमा सरकार वा निजी क्षेत्रको प्रयासबाट अस्तित्वमा आए । स्थानीय रूपमा उत्पादित तरकारीका लागि उत्पादन वितरण प्रणाली चार विभिन्न च्यानलहरूमा गरिन्छ ।
यद्यपि निजी क्षेत्रले कृषि उत्पादनको कारोबारमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आएको छ, त्यहाँ अझै केही सार्वजनिक क्षेत्रका निगमहरू एक वा बढी उत्पादनहरूको खाद्यान्न, दूध र दूध उत्पादन, तेलहन, कफी, चियाजस्ता धेरैको ट्रेडिङमा संलग्न छन् । यी हुन्— साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन (एसटीसी), खाद्य व्यवस्था तथा ब्यापार कम्पनि लिमिटेड र दुग्ध विकास निगम (डीडीसी ।
धेरै सरकारी र गैरसरकारी संगठनहरू कृषि उत्पादन मार्केटिङ र ट्रेडिङ गतिविधिहरूलाई समर्थन गर्न अवस्थित छन् । पूर्वाधार र बजार सूचना सेवाहरू बनाउनका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण संस्था कृषि विभाग, बजार सेवा विभाग हो । अन्य संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा सेन्ट्रल फुड रिसर्च प्रयोगशाला र मानक ब्युरो र मेट्रोलोजी र स्थानीय महानगरपालिका हुन् । तिनीहरूको भूमिका केही केसहरूमा सेवाप्रदायक हुन् र अन्य अवस्थामा खाद्य कानुन र तौल र नाप र स्वच्छताका लागि कानुन विनियोजन लागू गर्ने एजेन्सीहरूका रूपमा छन् ।
यसै गरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको महासंघ (एफएनसीसीआई) को निजी क्षेत्रको शीर्ष निकाय प्राविधिक शाखा पनि रहेको छ । एग्रो इन्टप्राइज सेन्टर (एईसी) ले खास गरी निजी कृषि व्यवसायको सहजीकरणमा सहयोग पु¥याएको छ । एईसी धेरै उच्च मूल्यको कृषि उत्पादनहरू जस्तै फूल, तरकारी, बीउ, रेसम, फल र तरकारीहरू, अंगोरा, ऊन, चिया, अलैंची, कफी र दुग्धजन्य उत्पादनहरूको व्यापार र बजार प्रमोसनमा धेरै सक्रिय छ । निजी क्षेत्रलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्नका लागि आवश्यक नीति र नियामक सुधारहरूको लागि सरकारसँग वकालत गर्न पनि यो संस्था अत्यन्त सक्रिय रहेको छ । एईसीद्वारा नेपालमा व्यापार मेलाहरूको संगठन, कृषि मेलाहरूमार्फत भारतमा नेपाली कृषि उत्पादनहरूको प्रवद्र्धन पनि गरिएको छ । एक जिल्ला एक वस्तु आदि कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । कृषि विकास रणनीतिले समेत निजी क्षेत्रको भूमिकाको उचित पहिचान गरेको छ, तर त्यसको सफलतम प्रयोग गर्नु आवश्यक छ ।
कृषि बजारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउनु सरकारको आधारभूत नीति हो । यस सम्बन्धमा, सरकारका प्रयासहरू निम्न दिशा निर्देशित छन्— क) मूल्य सूचना संकलन, संकलन र प्रसार, ख) ग्रामीण र सहरी बजार पूर्वाधारहरूको विकास, ग) स्थानीय समुदायको संलग्नताबाट ग्रामीण सडकहरूको निर्माण, र घ) निजी क्षेत्रको संलग्नता । बजार ठाउँहरूको निर्माण, व्यवस्थापन र सञ्चालन । यद्यपि निजी क्षेत्रको बढी चिन्ता भनेको नीतिगत कार्यन्वयन हो, जुन उनीहरूको संलग्नताका लागि उपयुक्त छैन । यसबाहेक, सरकारी प्रयासहरू किसान समूह र सहकारीलाई कृषिसम्बन्धी क्रियाकलापमा सहयोग पु¥याउने दिशामा निर्देशित छन्, अझै पनि निजी व्यापारी अनुचित फाइदा लिन्छन् भन्ने तर्क राख्ने गरेको छ । सरकारको नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणले सहज दृष्टिकोणलाई अघि सारेको छैन, यद्यपि विगतमा यस्ता परिवर्तनहरू भइरहेका छन् । कृषि मूल्य आयोगको स्थापना र कृषि ऐनको कार्यान्वयनको अथक प्रयासपछि पनि सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसले सरकारी नीतिमा अनिश्चितता र के गर्ने भन्नेबारे भ्रमको स्थिति प्रतिविम्बित गर्छ । प्रमुख खाद्यान्न र नगदे बालीका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति अझै पछ्याइएको छ । किसानहरूलाई सहयोग पु¥याउन उनीहरूको प्रभावकारितालाई जहिले पनि प्रश्न गरिएको छ, जबकि उनीहरूको अस्तित्वले निजी क्षेत्रको सञ्चालनका लागि धेरै समस्या ल्याएको छ । यी वास्तवमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि नीति अवरोधहरूमध्ये एक हो ।
निरपेक्ष अवधिमा मार्केटिङ लागत अधिक छ, किनकि कठिन भौगोलिक स्थिति र फसल काट्न र फसलपश्चात् सुधारहरूप्रति वस्तुतः पूर्ण लापरवाही रहेको अवस्था अझ पनि विद्यमान छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । उत्पादनमा मूल्य अभिवृद्धिमा ती गतिविधिहरूको महत्वलाई सरकारले उचित मान्यता दिएका छैनन् र परिणामस्वरूप स्थिति सुधार गर्न यी सम्बन्धमा वास्तवमै केही गरिएको छैन ।
अन्य एसियाली राष्ट्रहरूजस्तै नेपालको पनि गतिशीलता र बढ्दो दरका साथ युवा जनसंख्या ठूलो र बढ्दो छ । राम्रो शिक्षा हासिल गर्ने कडा आग्रह र विदेशी मुलुकमा जीवनको अनुभव गर्ने चाहनाले पछिल्ला केही वर्षहरूमा बढ्दो युवा नेपालीहरू, विशेष गरी कामदार श्रमिक र विद्यार्थीहरूको संख्या बढेको छ ।
युवा नेपालीहरूको बिदेशी बहावमा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो । कृषि भनेको देशका अधिकांश जनसंख्याका लागि प्राथमिक जीवन धान्ने गतिविधि हो । र, यो त्यस्तो प्रचलन हो, जुन हाम्रो परम्परा, जीवन, साहित्य, धर्म, ज्ञान र दर्शनमा गहिरो जरा गाडेको छ । यस क्षेत्रमा मानव संसाधनको अचानक गिरावट वा परिवर्तनले नाटकीय रूपमा सामाजिक जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई असर गर्न सक्छ । कृषि एक ग्रामीण घटना हो र तथ्यांकले देखाउँछ कि ग्रामीण कामकाजी उमेर भएका जनसंख्या धेरैजसो विदेशमा रोजगारी र कमाइको खोजीमा देश छोड्छन् । यसले कृषि श्रमको खाली ठाउँ सिर्जना गर्छ, जसले उत्पादकत्वलाई अत्यधिक असर गर्छ । कुनाको पसलमा धानको बोरा किन्न सजिलो छ, तर हामीले बुझ्दैनौं कि कति मानिसहरूले हाम्रो बोक्ने धानको बोरा ल्याउन कडा परिश्रम गरेका छन् । कुनै पनि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अपेक्षित तहको प्रतिफल दिन सक्दैन, जबसम्म त्यस देशका युवाहरू यसमा संलग्न हुँदैनन् ।
नेपालको कृषि क्षेत्र हाल मानव संसाधन र कृषि उद्यमशीलता घाटाबाट पीडित छ, किनकि नगद आकर्षणले देशबाट खाडी र अन्य देशहरूमा युवा र ऊर्जावान् दिमाग बढाउँदै छ । ग्रामीण भूमिमा रोजगारीका लागि पैसा जुटाउन जमिन र गाईवस्तु बेच्नु ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढ्दो चलन हो । तर, लुकको प्रलोभनमा फसेर विदेशका नेपालका धेरै युवाहरू कहिलेकाहीं अन्याय, असुरक्षा, आतंकवाद, दुर्घटना र गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरूको सिकार भएका छन् । काम गर्ने उमेर जनसंख्या आउटसाइजमा सर्दै थिए र तीमध्ये अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका थिए ।
नेपालमा बसाइँ सर्नुका कारणहरू संसारका अन्य ठाउँहरूमा जस्तै नै छन् । गरिबी, सीमित रोजगारीका अवसरहरू, बिग्रिएको कृषि उत्पादकत्व र राजनीतिक अस्थिरता आदि केही कारणहरू हुन् । नेपालका धेरै गाउँहरू छन्, जहाँ श्रमिक आप्रवासन एउटा समुदायको संस्कृतिका रूपमा स्थापित भएको छ । मित्र, आफन्त र शुभचिन्तकहरूको प्रभावले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम प्रवासको प्रवद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्छ । प्रवासलाई गरिबीबाट भाग्न मात्र होइन, व्यक्तिको जीवनस्तर सुधार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि लिइन्छ ।
त्यहाँ धेरै तरिका छन्, प्रवासको यो फारम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । हाम्रो जस्तो कृषि अर्थतन्त्रका लागि कृषि नीतिमा समयमै सुधार र कृषिको व्यवसायीकरण समयको आवश्यकता हो । नीतिहरूले कृषिलाई मर्यादित पेसा बनाउने र यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ । र, त्यो पर्याप्त इनपुट र लगानीबिना हुनेछैन । कृषिबाट गैरकृषिमा व्यवसायको संरचनामा उचित परिवर्तनले सामान्यतया देशको प्रगति देखाउँछ । तर नेपालमा यो बदलाव हतियार नभएको देखिन्छ । अन्य क्षेत्रका मजदुरहरूको उत्पादकत्वको तुलनामा हामीले आफ्नो किसानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । क्षेत्रको विकास यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ कि यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न सक्छ । स्याउ, चिया, कफी, अदुवा, इलायची, चीज, ताजा पानीको माछा र फूलहरूजस्ता उत्पादनहरूमा राम्रो निर्यात क्षमता छ । उच्च मूल्यका उत्पादनहरू र उनीहरूको व्यवसायीकरणमा उचित ध्यान दिएर कृषिले निश्चित रूपमा देशलाई अझ बढी आर्थिक स्वतन्त्र बनाउनेछ ।
अधिक र अधिक युवाहरूलाई ऊर्जा र उद्यमशीलता कृषिमा लगानी सुरु गर्न देशलाई समृद्ध बनाउन प्रेरित गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारले युवाहरूलाई सही प्रेरणा र अवसरहरू प्रदान गरेर यो गर्न सक्छ, ताकि मानिसहरूले आफ्नो मातृभूमिमा काम गरेर बढी सम्मानित महसुस गर्न सक्छन् । अधिक युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जाने विचारलाई बेवास्ता गर्नेछन् र उनीहरू यस व्यवसायमा सामेल हुनेछन् । खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र आयात प्रतिस्थापन प्राप्त गर्न कृषि उत्पादनको वृद्धि महŒवपूर्ण छ, जुन देशका युवाहरूमार्फत मात्र सम्भव छ । कोभिड–१९ पछि नेपाल फर्कने र नेपालमा नै रहने युवालाई सीपमूलक तालिम र कृषिमा आकर्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्रको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार नेपाली किसानले गत वर्षको बम्पर फसलको जति धान ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, जसले प्रत्यारोपण र माथिल्लो ड्रेसिङमा रासायनिक मलको गम्भीर अभाव भए पनि उत्पादन घट्ने छैन भनेर जोड दियो ।
कृषि विज्ञहरूले भने कि नेपालले समयमै मनसुन र प्रशस्त कृषि मजदुरका कारण रेकर्ड फसल कटौती गर्ने अवसर पाएको थियो, तर सरकारले कमजोर आपूर्ति गर्ने संयन्त्रका कारण उत्रियो ।
कोभिड–१९ को महामारीले विश्वव्यापी उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला विघटन गरेको हुनाले विश्वको सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने फोस्फरस मल, डायमोनियम फास्फेट (डीएपी) को आपूर्तिमा कमि र न्यूनता भएको थियो ।
त्यसो भएको हुनाले पहिलो र दोस्रो शीर्ष ड्रेसिङको समयमा युरियाको अभाव देखा प¥यो । यसको जवाफमा कृषि तथा पशु विकास मन्त्रीले बंगलादेशबाट युरिया ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए र ५० हजार टनको अनुरोध गरे । तर, सरकारले यसलाई आयात गर्न सकेन ।